महिनावारी: पुजापाठ गर्न, मन्दिर जान हुन्छ कि हुँदैन ?
रोचक महिनावारी: पुजापाठ गर्न, मन्दिर जान हुन्छ कि हुँदैन ?
मन्दिर भन्दा पवित्र हुन्छौ । मन्दिर भन्दा संवेदनशिल ( sensitive ) हुन्छौ । पिरियडमा मन्दिर नजानु भनेको पुरातन समाजमा मन्दिर टाढा हुन्थे । फेरि मन्दिर जानू भनेको मन्दिर गएर नमस्कार गरेर फर्कनु मात्र थिएन |
किन नजान भनियो फरक कोणबाट हेर्न सक्छौ । हिजो कुन अभ्यास थियो त्यसलाई जानेर बुझेर मात्र प्रश्न गर । राम्रो लागेमा अवश्य शेयर गर्नुहोला ।
हिन्दु समाजमा नारी देवि हुन् । यदि नारीले हिन्दु धर्म संस्कार संस्कृती जोगाउन नसके एउटा युग गुमाउनेछन् । तिमी महिनावारीमा अछुत वा अयोग्य हुदैनौ तिमी मन्दिर भन्दा पवित्र हुन्छौ । मन्दिर बनाउने मान्छे जन्माउने पनि तिमी/नारी हौ ।
भनिन्छ एउटा सफल पुरुषको पछाडि एकजना असल नारीको भूमिका हुन्छ । हुनपनि असल नारी भएको घर नै स्वर्ग समान हुन्छ ।
शास्त्रले पनि यहि बताउँदै आएको छ की असल नारी कुनैपनि घरको गहना हो । यहाँ हामीले नारीमा हुनुपर्ने केही गुणहरु उल्लेख गरेका छौं । जुन गुण हुने नारीहरु भएको घर स्वर्ग समान हुन्छ ।
– पतिव्रत धर्मको पालना गर्ने नारी भएको घरमा पनि कहिल्यै झगडा पर्दैन ।
– जुन नारी मीठो बचन बोछिन्, जुन नारीको आवाज मधुर छ र हरेक क्षण मायालु बोली÷ब्यवहार दर्शाउँछिन् भने त्यस्ता नारी भएको घर स्वर्गसमान हुन्छ ।
– जो नारीले घरमा आएका पाहुनालाई हार्दिकताका साथ स्वागत गर्छीन् भने त्यो घरमा पनि देवताका बास हुन्छ ।